I-Pinnacle Studio 21 Ultimate - VipCasting.cz
21, thwebula, okulandwayo, khulula, Pinnacle, Pinnacle 20, Pinnacle 21, thwebula, Studio, Ultimate, khulula
Umkhiqizo Pinnacle Studio ™ Ultimate 21 uthole amandla, lokusungula kanye namathuba ukukuvumela ukuthi usike amavidiyo akho buka kochwepheshe. Ungasisika ngokunembile futhi ngaphandle zinciphise isibalo zezinhlamvu amathrekhi HD 4K usebenzisa amathuluzi wezokusebenza, kuhlanganisa ukuhlelwa amarekhodi amakhamera amaningi, software ukuqopha esikrinini, izici ezintsha uhlukanise sesikrini namathuluzi eyinkimbinkimbi ukuze ahlelwe umsindo. Izinketho ezintsha 3D izihloko nemiphumela emangalisa uvula amavidiyo akho abe ezimibalabala izithombe nge ukuhamba kalula phakathi izigcawu. Jabulela ezingaphezu kuka 2000 imiphumela yokudala, plus ukusika-onqenqemeni imiphumela kusuka NewBlue zokuthuthukisa isithombe ngasinye, elungisa ukungapheleli neliqinisayo irekhodi athuthumelayo. Ungashisa umphumela ekunikezeni i-discs, ulayishe ngqo kumanethiwekhi omphakathi noma ukuthekelisa kumafomethi amaningi athandwayo. Ingabe unayo umbono wakho, manje yisikhathi sokuba ibe isofthiwe ngokoqobo Pinnacle Studio Ultimate 21.
I-software ye-Pinnacle Studio yokuhlela isivele isesizukulwaneni sayo seshumi nambili, ikulethela izici ezimbalwa ezithakazelisayo zomsebenzi ongcono kakhulu ngamashothithi athunjiwe. In the version Ultimateungahlela ividiyo kusuka kumakhamera angaphezulu kuya ayisithupha ngesikhathi esifanayo. Kuyathakazelisa kakhulu ukuba nethuba elisha ngokuphelele lokuhlela amavidiyo okwenziwe ngefomethi yeqiniso langempela. Amavidiyo we-360 ° yi-hit yamanje, ngakho uma uthatha ikhamera efanelekile, ungaba kalula umqondisi wangempela.
Izici eziphelele zokugcina
Ukuhlela kuze kufike amakhamera ayisithupha
Ukusekelwa kwevidiyo kweqiniso langempela ngaphakathi kwefomethi ye-360 ° + guqula ividiyo ejwayelekile
Ngaphezu kwe-2 000 yemiphumela emisha, imibhalo engezansi nezifanekiso
Imiphumela Ethuthukisiwe I-NewBlueFX Video Essentials III
Ukuthuthukisa ama-processors we-Intel 6. isizukulwane kanye nokusekelwa kwe-HEVC (H.265)
Ukulandelela okuhambayo ngenhloso yokufiphaza into
Ukusekelwa kwefomethi enkulu, isinqumo se-4K ne-3D
Nge Pinnacle Studio Ultimate 20 iqalisa iyiphi iphrojekthi ngenxa 64bitové yayo izakhiwo, inombolo engenamkhawulo amathrekhi ukuhlela Uhlaka ukunemba. Uyothola nakanjani bayakwazisa 4K ukwesekwa, futhi 3D HD video kanye nezinye nezakhiwo eziningi kuhlanganise XAVC, DVCPRO HD, VFR futhi MXF. Ngenxa yalokhu, kuyoba njalo umphumela ophelele futhi ophelele. Ungasebenzisa futhi ama-templates amasha we-100 amamenyu e-DVD.
Ungarekhoda emithonjeni ehlukahlukene amakhamera digital, DV, HDV, analog isiqophi emithonjeni efana mm 8, HI 8, VHS, SVHS, VHS-C, SVHS-C, VCRs noma amakhamera digital, omakhalekhukhwini kanye neminye imithombo.Isofthiwe yokusika isendaweni yesiCzech nezinye izilimi eziningi zezwe.Yibani ochwepheshe uma uhlela ividiyo nalolu hlelo oluphelele.
Amafomu okuthunyelwa ngaphandle
AVCHD, DVD (DVD-R, DVD-RW, DVD + R noma DVD + RW, DL)
I-Apple iPod / iPhone / iPad / TV, i-Sony PSP / PS3 / PS4, i-Nintendo Wii, i-Microsoft Xbox
Umsindo we-Dolby Digital 5.1channel
Isiqophi:. MVC, AVCHD, DV, HDV, AVI, MPEG-1 / -2 / -4, DivX, Flash, 3GP (i-MPEG-4, H.263), WMV, non-ngekhodi DVD nezihloko (kuhl DVD-VR / + VR), Mov (DV, i-MPEG-4, H.264), HEVC (H.265), DivX Plus MKV, XAVC, MXF, DVCPRO HD, S XAVC
Umsindo: MP3, MPA, M4A, WAV, AMR, AC3, AAC, Vorbis, WMA
Izithombe: JPS, BMP, GIF, JPG, PCX, PSD, TGA, TIF, WMF, PNG, J2K
I-Windows 10, i-Windows 8.x, i-Windows 7, i-64bit OS yinketho enconyiwe
I-Intel Core i3 noma i-AMD A4 3 GHz noma ngaphezulu
I-Intel Core i5 noma i-i7 Kunconywe ukuhlelwa kwe-AVCHD kanye ne-Intel Quick Sync Video ukwesekwa
I-Intel Core i7 noma i-AMD Athlon A10 futhi ingcono ukuhlela ama-UHD amavidiyo, ukuhlela okuningi kwekhamera namavidiyo we-360 °
I-4 GB RAM nokuningi, i-8 + GB inconyelwe amavidiyo we-UHD, ama-Multi-Camera editing namavidiyo we-360 °
I-NVIDIA GeForce 200 nephezulu (ukwesekwa kwe-CUDA)
I-8 GB mahhala isikhala sediski se-hard for ukufakwa